Ny Tsy Tokony Hanatsatohanao Hazokely Ao Anaty Loviam-bary, Na Finoanoampoana Hafa Ao Vietnam · Global Voices teny Malagasy
Ny Tsy Tokony Hanatsatohanao Hazokely Ao Anaty Loviam-bary, Na Finoanoampoana Hafa Ao Vietnam
Voadika ny 09 Desambra 2016 2:01 GMT
Vakio amin'ny teny 简体中文, বাংলা, русский, bahasa Indonesia, Español, Français, 日本語, Esperanto , 繁體中文, українська, English
Hihorohoro ireo zokiolona Vietnamiana raha mahita anao manatsatoka hazokely hijoro eo anaty loviam-barinao. Sary avy amin'ny pejy Flickr an'ny vondrona Quinn Dombrowski, lisansa CC.
Ity lahatsoratr'i Vinh Trần dia nalaina tao amin'ny Loa, tranonkala iray tsy miankina izaràna vaovao sy rakipeo izay mandefa tantara momba an'i Vietnam, ary averin'ny Global Voices avoaka ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.
Efa nahazo kapoka tànana ve ianao raha sendra nanatsatoka ny hazokelinao hijoro tao anaty loviam-bary tao Vietnam? Inona no olana amin'izany? Ndeha hozahantsika ny amin'io sy ireo fionoafoampoana hafa malaza ao Vietnam.
1. Ny saka mainty
Any amin'ny faritra maro eto ambonin'ny tany dia mpilaza loza ny saka mainty, saingy ho an'ny Vietnamiana kosa, mitranga ny antambo raha miditra ao an-tranonao ilay saka.
Fanazavàna avy amin'ny Profesora Hoàng Mai Nguyễn no omena antsika
Professor Nguyễn milaza fa ny fàka nipoiran'ity finoanoampoana ity dia ny finoana hoe rehefa maty ny olona iray ka misy saka miditra ny trano ary mitsambikina mandingana ny vatampaty, mety hifoha hipetraka ny maty. Raha ny fahitàna azy dia niainga avy amin'ny tantara iray nampintain'ny lovan-tsofina ho an'ireo taranaka nifandimby izy io, tsy misy porofo ara-tsiansa. Saingy hatramin'izay dia tsy nisy mihitsy olona nieritreritra ny hitrangàny, fa hiezaka hanao izay hanakanana ilay toejavatra tsy hitranga ny olona
2. Tsy Maintsy Atao Ankasa ny isan'ny Olona Maka Sary
Efa nanatrika fampakarambady Vietnamiana ve ary nahamarika fa raha tsy ankasa ny isan'ny olona miaraka maka sary, dia hisy olona iray hafa hitsambikina ho ao anatin'ny maro? Eny, misy ‘lojika’ ao anatin'izany.
Araka ny finoana Vietnamiana, ilay olona eo afovoany indrindra no ho faty voalohany (raha tsy ankasa ny isa). Indrindra fa hoe olona telo monja no eo anaty sary, dia ilay eo afovoany no voalohany mety ho faty, ary raha toa tsy maty izy, dia ho ratsy vintana daholo izy telo.
Averina indray. tsy misy porofo ara-tsiansa, fa…..iza no te-hanandrana?
3. Hazokely Ajoro Ao Anaty Loviam-bary
Hihorohoro ireo zokiolona Vietnamiana raha mahita anao manatsatoka hazokely hijoro eo anaty loviam-barinao. Fa nahoana?
Lazain'ny sasany hoe satria mitovy amin'ny lovia fandorana emboka manitra (miaraka amin'ilay hazokely ho solon'ny emboka manitra dorana).
Professor Nguyễn milaza fa tsy hoe dia ilay lovianà emboka manitra loatra no misarika vintana ratsy, fa satria izy io dia matetika ampiasaina mandritra ireo lanonana fanomezana voninahitra ny maty, ary mazàna ampifandraisina amin'ny fahafatesana iray nitranga tao amin'ny fianakaviana. Lazaina fa tsy misy porofo ara-tsiansa momba ny fitrangàn'ny vintana ratsy noho ny fanaovana azy io, saingy mpianatra iray antsoina hoe Lan Bùi no miteny fa ezahany atao ny tsy hametraka ny hazokeliny tahàka izay mba ho mariky ny fanajàna.
Izaho manokana tsy mahafantatra raha toa mety hitondra loza ilay finoanoampoana, saingy tohizako hatrany ny misoroka azy satria raisiko ho toy ny tsy fahaizana miaina ny mankahatra azy. Endrika fanajàna io ho ahy.
Anananao ankehitriny ny fandalinana fohy momba ireo finoana telo malaza ao Vietnam. Na ho mariky ny fanajàna, na ho fisorohana ny vintana ratsy, angamba efa afaka maka safidy misimisy kokoa ianao hiditra na tsia amin'ireny finoanoampoana ireny.
Fantaro bebe kokoa ny momba ireo finoanoampoana Vietnamiana, amin'ny alàlan'ny fihainoana ity rakipeo ity: